ဖုန်းအသစ်ထွက်တိုင်း ဝယ်ကိုင်သင့်လား? အဟောင်းကိုပဲဆက်သုံးသင့်လား?
27 Nov 2018 . 12:03 PM
အခုချိန် (၂၀၁၈) ထဲ ဖုန်းအသစ်ကိုင်ချင်တယ်ဆိုရင် ရွေးချယ်စရာ မော်ဒယ်အများကြီးပါ၊ ကြည့်လိုက်ဗျာ အရောင်းဆိုင်ကြီးတွေမှာ iPhone အသစ်တွေ၊ XS ၊ XR ဆိုပြီး ချစ်စရာအရောင်တွေနဲ့ ဆွဲဆောင်မှုရှိနေတယ်၊ Apple မကိုင်ချင်လို့ Android ဖက်လည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်း Samsung Galaxy S9 ၊ Note9တို့က လှပတဲ့ Display တွေနဲ့ မြူဆွယ်နေပြန်တယ်၊ OnePlus ၊ Huawei ၊ OPPO တို့ရဲ့ Flagship စမတ်ဖုန်းတွေကလည်း သူ့အလှပနဲ့သူ ပရိသတ်အာရုံဖမ်းစားထာသေးတယ်။
Apple’s new iPhone XS Max & XS
ဒီလိုဆိုတော့ ဝယ်ကိုင်သင့်လား? Black Friday တို့ Cyber Monday တို့ Local Promotion တို့နဲ့ သွားတိုးလို့ ဝယ်ကိုင်ထားပြီဆိုရင်တော့ တဏ္ဍတပေါ့။ အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲ ဖုန်းကခေတ်မအောက်သေးဘူး၊ Application သုံးရတာလည်း အဆင်ပြေနေသေးတယ်ဆိုရင်တော့ ရှိပြီးသား မော်ဒယ်အဟောင်းလေးကိုပဲ ပေပေတေတေ အသုံးပြုပေးလိုက်ပါ။ ဘာလို့လဲ? ပိုက်ဆံက ငွေတွင်းထွက်နေတယ်ဆိုရင် မပြောလိုပါဘူး၊ ဒါမယ့်ဘာလို့ ဝယ်မကိုင်သင့်တာလဲ?
စဉ်းစားကြည့်ဗျာ ဖုန်းတစ်လုံးကို $1,000 ပေးကိုင်ရတယ်၊ ဥပမာပေးရရင် iPhone X လိုပေါ့။ အရင်တုန်းက iPhone တစ်လုံးကို အလွန်ဆုံးပေးရ $700 မကျော်ဖူးဘူး၊ ဒါတောင် မျိုးဆက်ဟောင်းတွေနဲ့ ယှဉ်ကြည့်လိုက်ရင် (iPhone7vs. 8) ထူးထူးခြားခြား ကွာနေတာမျိုးမရှိဘူး။ 2017 iPhone X ကို $1,000 ပေးရလို့ သူ့နည်းပညာနဲ့သူ Balance ဖြစ်နေတယ်ထားဦး 2018 မော်ဒယ်တွေက ဈေးပိုမြောက်နေတယ်၊ Resolution လည်းနိမ့် Display Quality ကလည်း ခပ်ညံ့ညံ့ iPhone XR တောင်မှ $750 ရှိသတဲ့။ ဒါကိုင်မယ့်အစား $450 ပဲရှိတော့တဲ့ iPhone7ကိုင်မလား? စဉ်းစားစရာဖြစ်နေပြီ။
အခုလို iPhone တွေ ဈေးကြီးလာတော့ Samsung တို့ Pxiel ဖုန်းတွေပါ လိုက်တက်လာရော၊ ဘာမှမဟုတ်ဘဲ တန်ကြေးမြင့်လာလိုက်တာ Galaxy Note9ဆိုရင် $1000 ရှိတယ်၊ Pixel3ဆိုရင်လည်း အရင်နှစ် Pixel2ထက် $150 ($800) ဖြစ်သွားပြီ။ ဒီလိုပဲ တရုတ်ဈေးကွက်မှာဆိုရင်လည်း Huawei Device တွေ ဈေးကြီးလာတယ်၊ OPPO လည်းဒီလိုပဲ၊ Budget to Flagship တန်းမှာ Affordable Price နဲ့ ရောင်းချနေတဲ့ Xiaomi ၊ OnePlus ကိုတော့ ထည့်ပြောစရာမလိုပေမယ့် သူတို့ကိုလည်း စိတ်ချထားလို့ မရသေးဘူး၊ ဈေးကသူတို့ ပါးစပ်ထဲမှာပဲရှိတာဆိုတော့ လမ်းမမှားပါစေနဲ့ပဲ မျှော်လင့်ပေးရမှာပေါ့။
ဒီလိုဖုန်းက မတရားဈေးကြီးသွားလို့ အရမ်းကောင်းလွန်းနေလို့လားဆိုတော့လည်း မဟုတ်ပြန်ဘူး။ iPhone X နဲ့ XS ယှဉ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် Performance မတိမ်းမယိမ်းရှိနေသလို အသစ်ပါလာတဲ့ နည်းပညာတွေက အားရစရာမရှိဘူး ဖြစ်နေတယ်၊ ဆိုလိုတာ အထင်ကြီးစရာဖြစ်လာတာ မရှိဘူးပေါ့၊ ကင်မရာလေး နည်းနည်းပြောင်းထားမယ်၊ Security အတွက် FaceID အသစ်သုံးထားမယ်။ မဆိုစလောက်လေးပဲ ပြောင်းလဲသွားတာဆိုတော့ တော်ရုံလူတောင် iPhone ပြောင်းကိုင်ဖို့ စိတ်ကူးမရှိကြတော့ဘူး။ အဲ့တော့ အထိနာပြီလေး iPhone XR ထုတ်တာ ရပ်နားလိုက်ရပြီး အရင်နှစ် iPhone X ကိုပဲ ဆက်ထုတ်နေရတယ်။ ဒီလိုပဲ Laptop တစ်လုံးနီးနီး စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းတဲ့ iPad Pro 2018 တွေတောင် ထင်သလောက် မအောင်မြင်နေဘူးတဲ့၊ ဘာလို့လဲဆိုတာ ဖြည့်တွေးကြည့်လို့ရမယ်ထင်ပါတယ်၊ ပြီးခဲ့တဲ့ မော်ဒယ်နဲ့ ထူးထူးခြားခြား ပြောင်းလဲလာတာမရှိလို့ ဝယ်လိုအားကျနေတယ်ပြောတာပဲ။
ဒီလိုပဲ Galaxy S9 တုန်းက ဒီဇိုင်းလည်းအတူတူ၊ ကင်မရာပိုင်းလည်း အရမ်းမကွာ၊ စွမ်းဆောင်ရည်လည်း မတိမ်းမယိမ်းဖြစ်နေလို့ ထင်သလောက် ရောင်းအားမကောင်းဘူးလေး၊ သူ့ထက်တောင် ဈေးသက်သာနေတဲ့ Galaxy S8 အဝယ်သွက်နေလို့ ၂၀၁၈ နှစ်လယ်ပိုင်းအထိ အလုံးရေ 56 သန်းကျော်ရောင်းခဲ့ရတယ်။ ဒီတော့ပြောချင်တာက လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်အတွင်း ထွက်ရှိထားတဲ့ စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးဝယ်ထားပြီးပြီဆိုရင်တော့ ပြောင်းကိုင်ဖို့ စိတ်မကူးသေးပါနဲ့။
Galaxy S8 with Lamborghini Huracan Case
၂၀၁၅ အစောပိုင်းတုန်းက ကျော်ကြားခဲ့တဲ့ iPhone6တောင် အခုချိန်ထိ Latest iOS တင်သုံးနိုင်တယ်၊ Apps တွေလည်း ကောင်းကောင်း Run နိုင်သေးတယ်။ ဒီလိုပဲ ၂၀၁၆ တုန်းက ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Mobile Chip တွေဟာလည်း အခုချိန်ထိ Application တွေကို ကောင်းကောင်းကိုင်တွယ်နိုင်သေးတယ်၊ ဘက်ထရီမခံလို့ အသစ်လည်းသုံးမယ်ဆိုရင်တောင် ဘာပြဿမရှိဘဲ သုံးနိုင်သေးတာမလို့ အသစ်ပြောင်းသုံးဖို့ စိတ်မကူးပါသေးနဲ့ဦး၊ ပထမအချက်က Notch ဆိုတာကြီးကို ကြိုက်ရဲ့လား? ဘယ်ဖုန်းမဆိုကြည့်လိုက် Samsung နဲ့ Sony ကလွှဲလို့ ကျန်တဲ့ဖုန်းအားလုံး Notch တွေနဲ့ချည်းပဲ၊ သေးတာ၊ ကြီးတာလွဲလို့ပေါ့။
ဒါကြောင့် ငွေလည်းချွေတာမိအောင်၊ မလိုအပ်ပဲ ပိုက်ဆံမဖြုန်းမိအောင်၊ နောက်ဆုံး iPhone XS Max တို့ Google Pixel3တို့ Camera ကောင်းတယ်ထားဦး $1200 လောက်ပေးမယ့်အစား အရည်သွေးကောင်းတဲ့ Camera တစ်လုံးဝယ်ထားလိုက်တာက ကျေေကျနပ်နပ် ဓာတ်ပုံရိုက်နိုင်ပါဦးမယ်။ ဒီလိုဆိုတော့ မော်ဒယ်ဟောင်းလေးကိုပဲ လက်ကိုင်ထားပြီး ဘက်ထရီလဲသင့်ရင်လဲ၊ အရမ်းဟမ်းလာခဲ့ရင်တောင် Factory Reset ချပြီး အသစ်တိုင်းပြန်သုံးနိုင်တာမလို့ လောလောဆယ် ဖုန်းကအရေးမကြီးသေးဘူး၊ ဝယ်ဖို့စိတ်ကူးနေရင်တောင် ဖုန်းအတွက်ကုန်ကျမယ့်အစား အကျိုးရှိတာတခုခုသုံးလိုက်တာက ပိုသင့်တော်ပါတယ်လို့ပြောရင်း နိဂုံးချုပ်လိုက်ရပါတယ်။
ဖုနျးအသဈထှကျတိုငျး ဝယျကိုငျသငျ့လား? အဟောငျးကိုပဲဆကျသုံးသငျ့လား?
အခုခြိနျ (၂၀၁၈) ထဲ ဖုနျးအသဈကိုငျခငျြတယျဆိုရငျ ရှေးခယျြစရာ မျောဒယျအမြားကွီးပါ၊ ကွညျ့လိုကျဗြာ အရောငျးဆိုငျကွီးတှမှော iPhone အသဈတှေ၊ XS ၊ XR ဆိုပွီး ခဈြစရာအရောငျတှနေဲ့ ဆှဲဆောငျမှုရှိနတေယျ၊ Apple မကိုငျခငျြလို့ Android ဖကျလညျ့လိုကျမယျဆိုရငျလညျး Samsung Galaxy S9 ၊ Note9တို့က လှပတဲ့ Display တှနေဲ့ မွူဆှယျနပွေနျတယျ၊ OnePlus ၊ Huawei ၊ OPPO တို့ရဲ့ Flagship စမတျဖုနျးတှကေလညျး သူ့အလှပနဲ့သူ ပရိသတျအာရုံဖမျးစားထာသေးတယျ။
ဒီလိုဆိုတော့ ဝယျကိုငျသငျ့လား? Black Friday တို့ Cyber Monday တို့ Local Promotion တို့နဲ့ သှားတိုးလို့ ဝယျကိုငျထားပွီဆိုရငျတော့ တဏ်ဍတပေါ့။ အဲ့လိုမဟုတျဘဲ ဖုနျးကခတျေမအောကျသေးဘူး၊ Application သုံးရတာလညျး အဆငျပွနေသေေးတယျဆိုရငျတော့ ရှိပွီးသား မျောဒယျအဟောငျးလေးကိုပဲ ပပေတေတေေ အသုံးပွုပေးလိုကျပါ။ ဘာလို့လဲ? ပိုကျဆံက ငှတှေငျးထှကျနတေယျဆိုရငျ မပွောလိုပါဘူး၊ ဒါမယျ့ဘာလို့ ဝယျမကိုငျသငျ့တာလဲ?
စဉျးစားကွညျ့ဗြာ ဖုနျးတဈလုံးကို $1,000 ပေးကိုငျရတယျ၊ ဥပမာပေးရရငျ iPhone X လိုပေါ့။ အရငျတုနျးက iPhone တဈလုံးကို အလှနျဆုံးပေးရ $700 မကြျောဖူးဘူး၊ ဒါတောငျ မြိုးဆကျဟောငျးတှနေဲ့ ယှဉျကွညျ့လိုကျရငျ (iPhone7vs. 8) ထူးထူးခွားခွား ကှာနတောမြိုးမရှိဘူး။ 2017 iPhone X ကို $1,000 ပေးရလို့ သူ့နညျးပညာနဲ့သူ Balance ဖွဈနတေယျထားဦး 2018 မျောဒယျတှကေ ဈေးပိုမွောကျနတေယျ၊ Resolution လညျးနိမျ့ Display Quality ကလညျး ခပျညံ့ညံ့ iPhone XR တောငျမှ $750 ရှိသတဲ့။ ဒါကိုငျမယျ့အစား $450 ပဲရှိတော့တဲ့ iPhone7ကိုငျမလား? စဉျးစားစရာဖွဈနပွေီ။
အခုလို iPhone တှေ ဈေးကွီးလာတော့ Samsung တို့ Pxiel ဖုနျးတှပေါ လိုကျတကျလာရော၊ ဘာမှမဟုတျဘဲ တနျကွေးမွငျ့လာလိုကျတာ Galaxy Note9ဆိုရငျ $1000 ရှိတယျ၊ Pixel3ဆိုရငျလညျး အရငျနှဈ Pixel2ထကျ $150 ($800) ဖွဈသှားပွီ။ ဒီလိုပဲ တရုတျဈေးကှကျမှာဆိုရငျလညျး Huawei Device တှေ ဈေးကွီးလာတယျ၊ OPPO လညျးဒီလိုပဲ၊ Budget to Flagship တနျးမှာ Affordable Price နဲ့ ရောငျးခနြတေဲ့ Xiaomi ၊ OnePlus ကိုတော့ ထညျ့ပွောစရာမလိုပမေယျ့ သူတို့ကိုလညျး စိတျခထြားလို့ မရသေးဘူး၊ ဈေးကသူတို့ ပါးစပျထဲမှာပဲရှိတာဆိုတော့ လမျးမမှားပါစနေဲ့ပဲ မြှျောလငျ့ပေးရမှာပေါ့။
ဒီလိုဖုနျးက မတရားဈေးကွီးသှားလို့ အရမျးကောငျးလှနျးနလေို့လားဆိုတော့လညျး မဟုတျပွနျဘူး။ iPhone X နဲ့ XS ယှဉျကွညျ့မယျဆိုရငျ Performance မတိမျးမယိမျးရှိနသေလို အသဈပါလာတဲ့ နညျးပညာတှကေ အားရစရာမရှိဘူး ဖွဈနတေယျ၊ ဆိုလိုတာ အထငျကွီးစရာဖွဈလာတာ မရှိဘူးပေါ့၊ ကငျမရာလေး နညျးနညျးပွောငျးထားမယျ၊ Security အတှကျ FaceID အသဈသုံးထားမယျ။ မဆိုစလောကျလေးပဲ ပွောငျးလဲသှားတာဆိုတော့ တျောရုံလူတောငျ iPhone ပွောငျးကိုငျဖို့ စိတျကူးမရှိကွတော့ဘူး။ အဲ့တော့ အထိနာပွီလေး iPhone XR ထုတျတာ ရပျနားလိုကျရပွီး အရငျနှဈ iPhone X ကိုပဲ ဆကျထုတျနရေတယျ။ ဒီလိုပဲ Laptop တဈလုံးနီးနီး စှမျးဆောငျရညျကောငျးတဲ့ iPad Pro 2018 တှတေောငျ ထငျသလောကျ မအောငျမွငျနဘေူးတဲ့၊ ဘာလို့လဲဆိုတာ ဖွညျ့တှေးကွညျ့လို့ရမယျထငျပါတယျ၊ ပွီးခဲ့တဲ့ မျောဒယျနဲ့ ထူးထူးခွားခွား ပွောငျးလဲလာတာမရှိလို့ ဝယျလိုအားကနြတေယျပွောတာပဲ။
ဒီလိုပဲ Galaxy S9 တုနျးက ဒီဇိုငျးလညျးအတူတူ၊ ကငျမရာပိုငျးလညျး အရမျးမကှာ၊ စှမျးဆောငျရညျလညျး မတိမျးမယိမျးဖွဈနလေို့ ထငျသလောကျ ရောငျးအားမကောငျးဘူးလေး၊ သူ့ထကျတောငျ ဈေးသကျသာနတေဲ့ Galaxy S8 အဝယျသှကျနလေို့ ၂၀၁၈ နှဈလယျပိုငျးအထိ အလုံးရေ 56 သနျးကြျောရောငျးခဲ့ရတယျ။ ဒီတော့ပွောခငျြတာက လှနျခဲ့တဲ့ ၂ နှဈအတှငျး ထှကျရှိထားတဲ့ စမတျဖုနျးတဈလုံးဝယျထားပွီးပွီဆိုရငျတော့ ပွောငျးကိုငျဖို့ စိတျမကူးသေးပါနဲ့။
၂၀၁၅ အစောပိုငျးတုနျးက ကြျောကွားခဲ့တဲ့ iPhone6တောငျ အခုခြိနျထိ Latest iOS တငျသုံးနိုငျတယျ၊ Apps တှလေညျး ကောငျးကောငျး Run နိုငျသေးတယျ။ ဒီလိုပဲ ၂၀၁၆ တုနျးက ထုတျလုပျထားတဲ့ Mobile Chip တှဟောလညျး အခုခြိနျထိ Application တှကေို ကောငျးကောငျးကိုငျတှယျနိုငျသေးတယျ၊ ဘကျထရီမခံလို့ အသဈလညျးသုံးမယျဆိုရငျတောငျ ဘာပွဿမရှိဘဲ သုံးနိုငျသေးတာမလို့ အသဈပွောငျးသုံးဖို့ စိတျမကူးပါသေးနဲ့ဦး၊ ပထမအခကျြက Notch ဆိုတာကွီးကို ကွိုကျရဲ့လား? ဘယျဖုနျးမဆိုကွညျ့လိုကျ Samsung နဲ့ Sony ကလှဲလို့ ကနျြတဲ့ဖုနျးအားလုံး Notch တှနေဲ့ခညျြးပဲ၊ သေးတာ၊ ကွီးတာလှဲလို့ပေါ့။
ဒါကွောငျ့ ငှလေညျးခြှတောမိအောငျ၊ မလိုအပျပဲ ပိုကျဆံမဖွုနျးမိအောငျ၊ နောကျဆုံး iPhone XS Max တို့ Google Pixel3တို့ Camera ကောငျးတယျထားဦး $1200 လောကျပေးမယျ့အစား အရညျသှေးကောငျးတဲ့ Camera တဈလုံးဝယျထားလိုကျတာက ကကြေနြပျနပျ ဓာတျပုံရိုကျနိုငျပါဦးမယျ။ ဒီလိုဆိုတော့ မျောဒယျဟောငျးလေးကိုပဲ လကျကိုငျထားပွီး ဘကျထရီလဲသငျ့ရငျလဲ၊ အရမျးဟမျးလာခဲ့ရငျတောငျ Factory Reset ခပြွီး အသဈတိုငျးပွနျသုံးနိုငျတာမလို့ လောလောဆယျ ဖုနျးကအရေးမကွီးသေးဘူး၊ ဝယျဖို့စိတျကူးနရေငျတောငျ ဖုနျးအတှကျကုနျကမြယျ့အစား အကြိုးရှိတာတခုခုသုံးလိုကျတာက ပိုသငျ့တျောပါတယျလို့ပွောရငျး နိဂုံးခြုပျလိုကျရပါတယျ။